बदमासी भएको यहीँनेर हो । यदि संघीयता कार्यान्वयनलाई सहजीरकण गर्ने असल नियत सरकारको हुन्थ्यो भने यो ‘आधार र मापदण्ड निर्धारण’ गर्ने कानुन उहिल्यै बनाइदिनु आवश्यक थियो । त्यसपछि धारा २२७ मा व्यवस्था भएको ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था’ गर्ने कानुन प्रदेश सरकारहरूले बनाउन सक्थे । संविधानको अनुसूची ६ अन्तर्गत नं. ५ बुँदा अनुरुप प्रदेश सरकारहरूलाई प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ने थियो । सम्भवतः स्थानीय तहमा केही संख्यामा कर्मचारी पुग्ने थिए ।
सरकार यो बाटो हिँडेन । परिणामतः अर्को एउटा सिङ्गै वर्ष स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुगेर संघीयता कार्यान्वयन नभएको र बजेट खर्च हुन नसकेको बहानामा समय बिताउन सरकारलाई सहज हुने भयो ।
सेवामा आधारित गुठी मासेर सुदखोरीमा लिप्त सहकारीको महिमामण्डन आफैंमा कम ध्वंसक वृत्ति होइन । समग्रमा तदर्थवादी र अक्सर बद्नियतपूर्ण शैलीमा सञ्चालित विकास मोडलले सिर्जनात्मकभन्दा बढी ध्वंसात्मक परिणाम दिने संकेत पर्याप्त देखिएका छन् ।
नेपालमा एमए उत्तीर्ण गरेपछि शारीरिक श्रमका लागि कोरिया वा जापान दौडिन मरिहत्ते गर्ने युवा पुस्तालाई हेरेर निष्कर्ष निस्कन्छ— रेमिटान्स निर्भर यो विध्वंसात्मक मोडल मुलुकका विकास आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न असक्षममात्र छैन, यसले नेपालको भविष्यप्रतिको अपेक्षा मानक (एक्सपेक्टेसन बार) लाई नै अस्वाभाविक रूपले तल खसालिदिएको छ । प्रकाशित : असार २, २०७६ ०८:०२
प्राचीन समयमा सबै देशको राजनीति र प्रशासनमा चलनचल्तीमा रहेको यो प्रणाली यसपछि सबैतिरका राजनीतिक नेताको उच्च प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो ।
लुट प्रणालीले योग्यता, क्षमता, अनुभव र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई उपेक्षा गर्छ । संसारभरिका सबै मान्छेको माग भने योग्यता र क्षमता तथा अनुभवको प्रणालीको कार्यान्वयन हो । तर अहिले पनि प्रायः देशको राजनीति र प्रशासनमा यो प्रणाली हावी छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो ।
केही समययता लुट प्रणाली सार्वजनिक प्रशासनमा पनि हावी हुन थालेको छ । प्रशासनमा राजनीति घुस्न थाल्यो भन्ने कुरा व्यापक रूपमा आइरहेको छ । सरकारी संरचना हुँंदाहुँंदै कुनै काम र जवाफदेहिता नभएका सल्लाहकारहरूले मन्त्रालय र कार्यालयमा दिनहुँ गैरकानुनी रूपमा आदेश दिई काम गराइरहेका छन् । स्वस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीको लक्षण होइन यो ।
अर्कातिर, शिक्षा सेवा र प्रशासन सेवामा राजनीतीकरण गरियो । शिक्षक र कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीको काम छोडेर पार्टीका कार्यक्रममा हिँड्न थालेपछि अहिले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन सेवा ध्वस्तप्रायः भएको छ । यसलाई सुधार्न कुनै पार्टीको सरकार चाहँदैन । बडो गजब छ नेपालमा ! सरकारको तलब खाएर पार्टीको काम गर्न दिने व्यवस्था नेपालबाहेक अन्यत्र सायदै होला । यसबाट नेपालमा राजस्वको दुरुपयोग र हिनामिना भइरहेको छ ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय सरकारको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर नै ९,१६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको हो । तर, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रोकी करारमा कर्मचारी भर्ना गरी काम गर्न निर्देशन दियो, जसले संसारभर बदनाम भएको लुट र विकृत प्रणाली नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कानुनी रूपमै लागू गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण सहज ढंगले काम नभएकोप्रति समितिले चासो र सरोकार देखाउनु निकै सराहनीय हो । अहिले पनि केन्द्रमा अनावश्यक कर्मचारी राखिएका छन्, तिनलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी आप्र्तूि नहुन्जेल समितिले संघीय सरकारलाई संघबाट स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी खटनपटन गर्न निर्देशन गरेको भए बढी सान्दर्भिक हुन्थ्यो । समितिको निर्णय परिपक्व र कानुनसम्मत ढंगले आएको पनि मानिन्थ्यो ।
प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समितिमध्ये महत्त्वपूर्ण मानिएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गर्ने छलफल र निर्णयले राष्ट्रको मुलुकी प्रशासनको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन असर र प्रभाव पार्छ भन्नेमा कुनै विमति छैन । तर, यसले आज गरेको निर्णयले भावी पिढीको भविष्य सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन भनेर सोच्नुपर्छ । अग्रगमन यसको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ र योग्यता प्रणालीलाई नेपालको राजनीति र प्रशासनमा स्थापित गराउन जोड दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लुट प्रणाली अपनायौं भने हामी अझै सय वर्षपछाडि धकेलिन सक्छौं ।